Gareth Southgate Oo Lagu Eedeeyey Inuu Si Qaldan U
Tababaraha xulka qaranka England ee Gareth Southgate ayaa lagu eedeeyey inuu si qaldan u adeegsanayo difaaca Liverpool ee Alexander-Arnold, taas oo aan ahayn wax la fiirsan karayo, sida uu sheegay halyeygii difaaca England iyo kooxaha Arsenal iyo Chelsea ee Ashley Cole.
Alexander-Arnold ayaa 79 daqiiqadood u ciyaaray xulka England kulankii UEFA Nations League ee ay 2-1 kaga adkaayeen waddanka Belgium oo Axaddii ay isku haleeleen garoonka Wembley, kaas ay guusha ku hoggaamiyeen Marcus Rashford oo rikoodhe dhaliyey iyo Mason Mount oo gool layaab lahaa libinta ugu go’aamiyey dalkiisa.
Southgate ayaa wada ciyaarsiiyey Alexander-Arnold, Kyle Walker iyo Kieran Trippier oo dhamaantood difaaca midig ka ciyaara, waxaana uu dhinaca bidix geeyey Trippier, halka uu Walker dib ugu dejiyey booskiisa iyo Arnold oo uu hore u dhigay.
Shaxda uu ku ciyaaray Southgate ayaa ahaa 3-4-3, waxaana xagga dambe wada taagnaa Walker, Dier iyo Harry Maguire, taas oo ka dhigan in Alexander-Arnold iyo Walker ay difaaca midig ka ciyaarayeen.
Ashley Cole oo warbaahinta la hadlay ayaa ku eedeeyey Southgate in qaabka uu u ciyaarsiinayo Alexander-Arnold ay tahay mid qaldan oo luminaysa qaab ciyaareedkiisa iyo wixii uu qaban lahaa intaba.
“Ma jecli inaan arko isaga oo ka ciyaaraya garab dambe. Waxa uu ku habboon yahay ka ciyaarista xagga hore iyo iyadoo uu soo gelayo gerada ganaaxa.” Ayuu yidhi Cole oo intaa ku daray: “Alexander-Arnold waxa uu ka imanayaa meelaha bannaan, waxaad arkaysaa kubbadaha uu dhinaca ka keenayo iyo baasaska uu dhiibayo. Waxa uu shaqadiisa ugu badan ku qaatay inuu dhinaca bidix eryado, inuu isku dayo inaan laga dambayn, taas oo ay ila tahay in aanay ahayn sidii ku habboonayd ciyaartiisa.”
“Man United Mar Waa Heer Caalami Marna…..” – Xiddig Man City